Gọọmenti Anambra Amalitela Ọrụ Mmetụaka n'Okporoụzọ - Igbo News | News in Igbo Language
Apr 21, 2022 - 07:48
Ezi okporozọ so n'otu ihe kacha akwalite ọnọdụ mmepe obodo ọbụla, n'ihi oke uru ọ bara na ọtụtụ ihe dị icheiche dabeere na ya.
N'ihi nke a, gọọmenti steeti Anambra amalitela ọrụ mmetụaka n'ụfọdụ okporoụzọ dị icheiche mebisiri emebi na mpaghara ebe dị icheiche na steeti ahụ.
Ya bụ ọrụ mmetụaka bụ nke a malitere n'ịgbaso ntụziaka ahụ ọchịọra steeti ahụ bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo nyere ka e mee nke ahụ iji kwelite ezi ọnọdụ okporoụzọ na gburugburu steeti ahụ.
Ụfọdụ okporoụzọ dị icheiche a malitegoro ọrụ mmetụaka a na ha
n'Awka bụ isi obodo ahụ gụnyere okporoụzọ Obi Okoli Avenue, gburugburu njikọụzọ ‘UNIZIK Junction’ gburugburu njikọụzọ ‘Y Junction’, ụzọ ahụ siri Nodu gaa Ọkpụnọ wee pụta ụlọ nkwariakụ Geneva, tinyere ụfọdụ ebe ndị ọzọ.
N'okwu ọ gwara ndị ntaakụkọ banyere nke ahụ, Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti Anambra, Injinia Ifeanyi Okoma kwuru na Gọvanọ Soludo ekpebiela itinye uche na akụnụba n'ihe metụtara ọnọdụ okporoụzọ steeti ahụ, iji mee ka ha kwụrụkwa chịm.
O kwupụtara afọojuju ya banyere etu ya bụ ọrụ si aga nakwa ogoogo e ji arụ ya; ọbụladị dịka ọ dụrụ ndị ji ọrụ ngo ahụ ka ha jide ka ha ji ma gharakwa ịlaghachi azụ maọbụ daa mba. Ọ kọwara na onye ji ọrụ ahụ malitere n'anaghị gọọmenti tọrọ maọbụ afụ, ma kwukwa na ọ na-arụ ọrụ ahụ n'efu.
N'okwu nke ya, otu onye n'ime ndị na-aga n'okporoụzọ ahụ, bụ Maazị Valentine Onwuka mere ka a mara na ha na-agabiga ihe isi ike dị icheiche ma ha na-agba n'okporoụzọ ahụ n'oge mbụ, n'ihi na ọ gbapusiri agbapu ma na-emebisikwara ha ụgbọala. O kelezịrị Gọvanọ Soludo maka ya bụ ọrụ ọ malitere, ma rịọ ya ka o jisie ike n'ọrụ.
Ọrụ mmetụaka ahụ a malitere na nsonso bụ nke e ji akụrụngwa na ígwè ọrụ dị icheiche wee na-arụ, ma bụrụkwa nke ebumnobi ya bụ iji mee ka njem okporo ụzọ na-aga siri werere na mpaghara ahụ, n'enweghị ihe agbakata akwụrụ maọbụ ihe mberede okporoụzọ n'ihi ajọ okporoụzọ, ọkachasị ugbua udummiri na-akpụdobe nso n'uju.
N'Anambra, Mmadụ Atọ Anwụọla n'Ihe Mberede Okporoụzọ
Izunna Okafor Feb 8, 2022 0